तिमी नभएको शुन्य सहर
होहल्ला कोलाहालको बीचमा पनि ।
हुलका हुल सधै हतारका मान्छेहरु
हजारौ संख्याको मोटरगाडीको कराइ
अझ छन् केही हजार थान कलकारखाना
जहाँ सधै बजिरहन्छ खताराका साइरानहरु ।
बेपत्ताको कचमन्न रात झै
ठिङ्ग उभिएको यो सहर
जिस्क्याउदै मेरो शुन्यतालाई ।
चर्को अग्रेजी गीतको स्वरमा
छिल्लिदै कराउने डान्सबारका डान्सरहरु
दोहोरी गजल वा अन्य केही रेष्टुरेन्टका आवाजहरु
बेलाबेलामा सवारी र बिषेश बेलामा दिने तोपका स्वर
सबै सबै निक्कै सानो छ मेरा लागि ।
म सोच्छु सहर किन यति साह्रो शान्ति छ
मुर्दा शान्ति साँच्चै मुर्दा शान्ति ।
तिमी नभएको सहर शुन्य सहर
यो कोलाहलको वीचमा पनि ।
यो रेडियो लोकतन्त्र हो । अनि हामी धादिङबेसीबाट बोलिरहेका छौ । यसरी मैले बोलेको पनि झन्डै चार बर्ष नाघेछ । यस बीचमा थोपल र आँखु खोलामा धेरै पानी बगिसक्यो । अनि धेरै कुरामा परिवर्तन आए ।
यस बीचमा धादिङबेसीमा अरु रेडियो पनि थपिएका छन् । अरु कुराको धेरै विकास नभएपनि नेपालको पत्रकारितामा रेडियोले दक्षिण एसियामै राम्रो फड्को मारिसकेको छ भनिन्छ । तर यस्को ब्याबसायिकताको कुरा गर्ने हो भने हामीले धेरै पटक सोच्नु पर्छ हाम्रो रेडियोको अबस्था कस्तो छ ?
रेडियोमा काम गर्दा ताका रेडियोकै लागि स्वर भएकोमा स्थानिय शर्मीला थापा थिइन । भर्खरको युवा ( हुन त म पनि खासै उमेर ढल्केर कपाल पाकेको त होइन) तैपनि म भन्दा कमकी । धेरै पछि उनीसँग फोनमा कुरा गर्न पाइयो उनले भनिन् मैले रेडियो छाडिदिएँ अरु नै काम गर्र्र्दैछु ।
अर्का सम्भावना बोकेका बिमलराज ढकाल थिए । उनमा प्रतिभा नै भन्दा पनि केही गरौ भन्ने जोस थियो । त्यसले सजिलै भन्न सकिन्थ्यो उनी काम गर्न र खटिन सक्ने मानिस थिए । उनको बारेमा पछि बुझ्दा थाहा भयो उनी त्यो रडियो छाडेर बिदेश गएछन् ।
यी दुबै प्रतिनिधी मात्रै हुन् जो रेडियोमा धेरै टिक्न सकेनन् । कारण सजिलो छ हाम्रो उदाहरणिय भनिएको धेरै रेडियोले खटेर काम गर्नेलाई बाँच्न सक्ने गरी केही गर्न सक्ने अबस्था छैन । अनि रेडियोमा काम गर्नेहरुमा पहिलेका केही महिनाको जोश जाँगर सकिन्छ अनि सुरु हुन्छ मनमा तनाव । अनि भोको पेटको रडियोकारिता कहिले सम्म चल्न सक्छ ? यो रेडियो लोकतन्त्रको मात्रै कुरा होइन । नेपालमा भएका चार सय भन्दा माथि रेडियो मध्ये ८० प्रतिशत रेडियोको साझा समस्या हो ।
रेडियो स्याङजाका स्टेशन म्यानेजर रमेश गोदार काठमाडौमा एउटा कार्यक्रममा भेट भए । पहिले देखि कै चिनजान भएको कुरा गर्दै जाँदा रेडियोको कुरा भयो । उनले अरु भन्दा बढि समस्या रेडियोकर्मीलाई टिकाउन भएको कुरा गरे । उनले भने के ढाट्नु हामी पैसा दिन सक्दैनौ । हाम्रामा सिक्छन् पोखरामा पैसामै काम गर्छन । नजा भन्न सक्ने अबस्था छैन ।
धादिङको बाटोमा अरु कुनै जिल्ला जाँदा म सधै रेडियो सुन्ने जमर्कोमा हुन्छु । त्यसमा रेडियो लोकतन्त्र पनि पर्छ । तर यो बिचमा मैले कहिलेकही स्याइसुइ गरेर सुनेको बाहेक बाटोमा दौडिदा कहिल्यै सुन्न पाइन । म रेडियोमा हुदा राजमार्ग छेउका धेरै गाउँले त्यो रेडियो सुन्न सक्थे ।
शायद यो बर्षको बैसाख तिर हुन पर्छ लोकतन्त्रमा काम गर्ने लक्ष्मी भुजेलसँग भेट भयो । गफगाफ पछि भनिन् म त हप्ताको एक पटक मात्रै कार्यक्रम चलाउँछु । त्यो पनि रेडियोको माया लाग्छ र पो । अहिले त खै रडियोको पावर पनि कम गरेर चलाको रे । त्यही धादिङबेसीमै सुनाउन पनि गारो ।
चार बर्ष अघि उतm रेडियो पाँचसय वाट क्षमतामा चल्थ्यो ।
पत्रकारिताका गुरु पी खरेल भनिरहन्छन् अव रेडियोको छाँटकाट हुने दिन आउँदैछ । साच्चैको जस्ले समुदायका कुरा भनेर यो चाँही मेरो रेडियो हो भन्ने बनाउन सक्दैनन् त्यस्ता रेडियो बन्द हुन्छ । त्यसैले स्थानिय रेडियोले काठमाडौमा डलर झार्न हामीले यति धेरै रडियोसँग नेटवर्क गरेको छौ भनेर धाक लाउने काठमाडौका ठूला ठान्ने रेडियोको लिस्टमा एउटा रेडियो जोडिने भन्दा स्थानिय मानिसका सरोकारका कुरालाई प्रभावकारी रुपमा कसरी भन्ने बारेमा चिन्ता गर्न सक्नु पर्छ । अनि रेडियोमा काम गर्नेले रेडियोमै काम गरेर कसरी बाँच्छ भन्ने कुराको ग्यारेन्टी पनि गर्न सक्नु पर्छ ।
नत्र भने भात होटेल जस्तो उद्घाटन गरेकै दिन देखि सामुदायिक रेडियोका शेयर होल्डर बनेका समुदायका साउजीहरुको जोशमा थपघट हुने बित्तिकै रेडियोको प्रशारण हुने क्षमता पनि तलमाथि भैरहन्छ । अरु ब्यापारबाट फाइदा भयो पाँचसय वाट बनायो घाटा लाग्यो ५० वाटमा झा¥यो ।
रेडियोको विकाससँगै ब्यबसायिकता भयो भने नेपालका धेरै रेडियो लोकतन्त्रहरुका दिन होला नत्र भने झन ५० वाट पछि बन्द गर्नुको बिकल्प हुदैन । अनि त्यसबेला रेडियो खोलेर ठूलो साहुजी, ठूलो पार्टी वा धेरै नाफा कमाउँछु भनेर देखाउनको लागि रेडियोको “र”थाहा नै नपाई खोल्नेहरुले पैसाको नास र स्थानिय जनशक्तिको श्रमशोषण भन्दा केही गर्ने छैनन् । रिसानी माफ ।
Labels: article of community radio, article of gocool, community radio, dhorje, gocool, media, neapli media, radio, story of radio, thokar
Labels: cultural documentary, documentary, documentary by gocool, Ghewa, gocool, nepali documentary, tamang culture, tamang tredio, thokar
दिनमा त बिर्सन्न नै
किन सुत्न दिन्नौ
सपनीमा आइ आइ ।
भन्थ्यो कस्तो झुसिल्किरा झै ।
बेला उस्तै बोली उस्तै
तर समयको फन्कोले हो क्योरे
पहिला घन्टो बोल सुन्छु भन्ने तिमी
फोनमा हेल्लो पनि भन्दिनौ ।
ठ्यक्कै फर्काउन पाए
मेरा हातको सिरानीमा
तिमी भन्दै थियौ मेरो संसार ।
कस्तो नशा बसेछ खै
हरेक दिन सुत्ने बेलामा
म बिना काम नै
तिम्रो तस्बिरसँग गुनासो सुनाउँछु ।
छड्के आँखा हजुरको कहिले कर्किने हो ?
अन्त तिर लाको मन कहिले फर्किने हो ?
सुख्खा भाछ मन पनि फस्टाउदैन बाली
हरियाली बढाउन जल कहिले छर्किने हो ?
पल पल याद आउँछ हजुर सँग बितेका
फ्याट्ट गाला हान्दै फेरी कहिले झर्किने हो ?
मस्किएर अरु सँग बोले जस्तो गर्दा पनि
देखेर नि नदेखे झै कहिले तर्किने हो ?
असोज ३० २०६८
दिगो शान्तिका लागि आर्थिक विकास
उसँग पैसा छ र त बिदेश जान्छ त्यो पैसा यही लगनी गर्ने हो भने हामी बिदेशमा गाको पैसा यही कमाउन सक्छौ । नारायण नेपालः मोरङ
हेर्नुस पैसा भन्दा पनि ठूलो जोस जागर चाहिने हो । अमरदिप कुमार साहः धनुषा ।
आखिर एक प्रसेन्ट पनि हाम्रो फार्मले मासुजन्यमा बृद्धि ग¥यो भने देखिन हामीे आम्दानी भएको ठान्छौ ।
यस्तो बाहिर बंगुरको कार्यक्रम बाहिर कतै छैन । चन्दे्रश्वर यादवः सर्लाही ।
हाम्रो आर्थिक अबस्था पहिलाको भन्दा राम्रो भयो । सुमित्रा माझीः सर्लाही ।
पैसा कमयो भने अरुलाई पनि सहयोग गर्न पाइन्छ । राममणी कुसवाहः धनुषा ।
काम गर्दा खेरी इमान्दार बन्नु प¥यो । सिनसियर बन्नु प¥यो । श्रीराम दासः पर्सा ।
म भारी बोक्छु । मलाई किसान भन्न लाज लाग्दैन । निरज प्रधान ।
आँट छ । हरेस कुनै काम बाट खाएको छैन । इन्दलप्रसाद यादवः बाँके ।
म यो काम गर्न सक्छु भन्ने आँट हुन प¥यो । टिकाबहादुर खड्काः मकवानपुर ।
परिवारले सालको तीनचार लाख आम्दानी भनेको राम्रो कुरा हो । नारायण नेपालः मोरङ ।
असम्भव भन्ने केही छैन । सम्भव नै सम्भव छ । मात्र के हो मान्छेले चासो राख्नु प¥यो । एकमाया बिकः बाँके ।
नेपाल मानव विकासको सूचकांकमा १३८ औं स्थानमा छ । एकजना नेपालीले औसतमा बार्षिक ३१ हजार रुपैयाँ आम्दानी गर्छन ।
स्रोत र साधनका हिसाबले भने नेपाल निकै धनी छ । यहाँ आर्थिक विकासका प्रशस्त संभावनाहरु छन । तर उपयुक्त कार्यक्रम र अवसर नपाउँदा धेरै नेपाली या त विदेशिएका छन, अथवा रोजगारीको खोजिमा भौतारिइरहेका छन । शहरी क्षेत्रका मानिसहरुको जीवनस्तर केही सरल भएपनि नेपालका दुर्गम गाउँको अवस्था अत्यन्तै नाजुक छ । खानाको कमी र यसकै कारण लाग्ने रोगले बर्षेनी धेरै मानिसहरुले ज्यान गुमाइरहेका छन । महिला र केटाकेटीहरु यस्तो समस्याबाट बढी पीडित छन ।
तर सबै ठाउँको अवस्था एउटै छैन । केही मानिसहरु प्रतिकुल परिस्थितिमा पनि आफू र समुदायलाई फाइदा हुने काम गरिरहेकाछन ।
नेपालको नक्शामा बाँके जिल्ला देखाउने
मध्यपश्चिम नेपालको बाँके जिल्ला । दुई छोरीकी आमा एकमाया विश्वकर्मा बागेश्वरीको मनकामना गाउँमा बस्छिन । १० बर्ष अघिसम्म एकमायालाई महिलाले घरबाहिर गएर काम गर्न सक्छन भन्ने विश्वास थिएन । घर बाहिरको सबै काम परिवारका पुरुष सदस्यले गर्थे । श्रीमानको जागिरमा निर्भर एकमायाले केही गर्नुपर्छ भन्ने नै ठानिनन् । तर विक्रम संवत २०५७ सालमा उनका श्रीमान दैलेखको नौमुले आक्रमणमा परे । सशस्त्र द्वन्द्वका बेला विद्रोही पक्षबाट श्रीमान मारिएपछि उनले जीवनमा नसोचेको दुःख पाइन ।
श्रीमानमा आश्रित हुनुपर्थ्यो । उहाँको डेथपछि सबै जिम्मेवारी मलाई आयो । उहाँको काजक्रिया देखि सबै जिम्मेवारी आयो । त्यतिबेला नानीहरु साना साना अवस्थामा थिए ।
एक्ली एकमायालाई सहयोग गर्ने कोही भएन । पैसा बिना गुजारा नचल्ने ठानी उनी घरबाट बाहिर निस्किइन । दिदीबहिनीहरुसँग सल्लाह गरिन, समूह बनाइन र महिनाको १० रुपैयाँ जम्मा गर्न थालिन ।
पैसा भएर पनि पैसा बचत नर्गने यस्तो खालको थियो परिपाटी । किन बचत गर्नुप¥यो र ? भएपछि बैंक व्यालेन्स गरे भैईहाल्छ आवश्यक परे बैंकबाट ल्याए भईहाल्छ । भन्ने खालको मात्र थियो कन्सेप्ट ।
हाम्रै पैसा जम्मा गरेर के हुन्छर ? घरैमा जम्मा गरे पनि हुन्छ भन्ने कुरा पनि भयो पहिला । अहिले चाही बुझ्दै आए ।
मन मिल्ने दिदीबहिनीहरुको समूहको नाम नै मिलीजुली बचत समूह रह्यो । अहिले यो समूहमा ७ सय सदस्य छन । एकमायाको घरबाट सुरु भएको बचत अभियान ३ वटा गाउँ विकास समितिमा पुगिसकेको छ । मिलीजुली स्वाबलम्वन कृषक बहुउद्धेश्यीय सहकारी संस्था कानूनी रुपमै दर्ता भएको छ । सहकारीमा अहिले ४१ लाख रुपैयाँ नगद छ । यसले बार्षिक झण्डै डेढ करोड रुपैयाँ बराबरको सहायता पुर्याएको छ ।
एकमाया विक ः
यो १ करोड २९ लाखको कारोवार गरिरहदाखेरि यो क्षेत्रको विकासको करा गर्ने हो भने कति करोड पुग्या छ । नदेखिने के जिविसको कुरा गाविसको कुरा जानेर विभिन्न संघसंस्थाका कुराहरु तिनिहरुले ल्याएका डोनरहरुका करा गर्ने हो भने त यहाँ कति करोड कति करोडको विकास भएको छ ।
एकमाया यो सहकारीकी अध्यक्ष हुन । सहकारीले सदस्यहरुलाई दिएको ऋण सही ठाउँमा प्रयोग भए नभएको पनि हेर्छिन उनी । यहाँबाट पैसा लानेहरु सबै गरिब छन ।
महिलाहरुको समूहले, नजिकैको नेपालगञ्ज बजारमा खपत हुने तरकारी र मासु उत्पादन गर्छ । समूहमा काम गर्ने बानी नै एकमाया र उनका सहयोगीहरुको सफलताको कडी हो । उनीहरु साना साना समूह बनाएर काम गर्छन । आएको आम्दानी बाँडेर लिन्छन ।
सस्तो व्याजमा आफैले लगाएको व्याजमा आफ्नै पैसा चलाएर भनेको भाकामा तिर्छ आन्दानी गरेर ।
उनीहरु ठूला कुरामा लगानी गर्दैनन ।
करोड रुपैयाँ कमाउनेहरुले के गर्छ भनेर पैसावालाहरुसंग काम गर्छन । पुँजीपतिसंग काम गर्छन । तर हामी न्युन आए भएका मान्छेहरुसंग भोली के खाने भन्ने मान्छेमाहरुसंग हामी काम गर्छौ ।
उनीहरुले गर्ने कामले गाउँ र समुदायलाई सहयोग गर्छ । मध्य असारमा किसानलाई मल चाहिन्छ । तर किसानलाई चाहिएको बेला बजारमा मल पाइदैन । किसानहरु बढी मुल्य तिरेर मल किन्न बाध्य हुन्छन । यो समस्या समाधानका लागि सहकारीले मल खरिद गर्ने निधो गर्यो । बजारमा मल नभएका बेला समेत यहाँका किसानले सहकारीबाट सजिलै मल पाएका छन । यसबाट सहकारीलाई फाइदा त भएकै छ, किसानले पनि भनेको बेला चाहिएको सामान पाएका छन ।
मलको समस्या समाधान भएपछि एकमायाको टोलीले किसानलाई पर्ने अर्को अप्ठ्यारोमा काम गर्ने सोचाई बनायो । राम्रो काम गरेको थाहा पाएपछि सहकारीलाई सघाउन विभिन्न संघसंस्था आए । यसरी आएको ३० लाख रुपैयाँ उनीहरुले सिंचाइका लागि प्रयोग गर्ने भएका छन । आकाशे पानीको भरमा खेति गर्ने यहाँका किसानहरुले सहकारीको समेत गरि ३३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेर सिंचाइका लागि बोरिङ गर्ने भएका छन ।
यो सहकारीले गाउँमा पर्ने साना साना अप्ठ्यारामा काम गर्छ । उनीहरु करोड लगानी गरेर लाखको कुरा गर्दैनन् । उनीहरु त दश रुपैयाँ जम्मा गरेर करोडको कुरा गर्छन ।
नगरे पछि हात बाँधेर बस्नुभयो भने काही पनि गर्न सकिदैन । गर्न केही खोज्यो भने धेरै उपाय छन् धेरै अवसरहरु छन् । धेरै बाटोहरु छन् । धेरै कुरा गर्न सकिन्छ ।
प्रताव विक ः
म त एकदमै गर्व गर्छ । नि दिदी प्रति त । जहाँपनि म हेर्छु । उहाँको बोल्नेदेखि लिएर वहाँ एकदमै
परफेक्ट हुनुहन्छ ।
नेपालको नक्सामा बाँकेबाट हेटौंडा आउने
एकमायाको घर भन्दा ६ सय किलोमिटर पूर्व मध्य नेपालको हेटौंडामा बस्छन टिका बहादुर खड्का । उनी दोलखाको दुर्गम गाउँ फस्कुबाट आएका हुन । विगतको द्वन्द्वका बेला प्रशासनले बिद्रोही भएको ठानेपछि टीकाको परिवार नै गाउँमा बस्न सकेन । ९ बर्ष अगाडि गाउँ छोडेर हेटौंडा आउँदा उनीसँग बाबुआमा र एउटा भाइ बाहेक सम्पत्तिको नाममा अरु केही थिएन ।
गाउँको मानिस सानै भएपनि हेटौंडा बजारमा बिरानो भए । परिवार र आफ्नो पेट पाल्न कामको खोजिमा हिंडे । स्नातक सम्म पढेका टिका कुरिअरमा आएका चिठ्ठी घर घरमा पुर्याउने काममा लागे । साइकलमा सामान ओसारेर पसल पसल पुर्याए । हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगमा काम गरे ।
कामको खोजीमा भौतारिंदै गर्दा टिकाका भाईले ग्रिल उद्योगमा काम पाए । मेहनती शंकरले थोरै समयमै सिप सिके ।
शंकर खड्का ः
आफ्नै ग्रील उद्योग भन्नेथ्यो एउटा यहाँ यसो ख्याल ख्यालमै साथी भाइको नाताले आउदा आउदै मैले छ महिना जति काम गरे ।
अरुकोमा काम गर्दा हार खाइसकेका टिकाले भाइको सिपबाट धेरै गर्न सकिने देखे । अनि सुरु भयो उनीहरुको जीवन फेर्ने अभियान । आफूसँग भएको र साथीभाइसँग मागेको ३० हजार रुपैयाँले ६ बर्ष अगाडि सुरु गरेको ग्रील उद्योगबाट अहिले महिनाको डेढ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी आम्दानी हुन्छ ।
टिका बहादुर खड्का ः
पैसा नभएको हुनाले सेकेन्डह्यन्ड मेनि हामीले २० हजारमा किन्यौ । अन्य लागनी भने अन्य ब्यतिmसँग खोसखास गरेर पनि थोरैथोरै सामान ल्याउने अनि त्यसलाई पठाइ हालेपछि फेरि पैसा लिएर सुरुमा लगभग ३० हजारको हाराहारीमा हामीले सञ्चालन ग¥यौ ।
अहिले उनीहरुलाई कामको खाँचो छैन । छ बर्ष बित्दा नबित्दै समझदारी ग्रील उद्योग हेटौंडा बजारको राम्रो उद्योगमा गनिन थालेको छ ।
सानो घरको बसाई र खान पनि नपुग्ने कमाईले पिरोलिएको मन ग्रील उद्योगको आम्दानी पछि शान्त बनेको छ । भएको सम्पति ल्याउन नपाएपनि हेटौडाको ढुङ्गेधारा टोलमा दुई तल्ले घर बनाएका छन् उनीहरुले ।
पहिला त हाम िअब चियासिया खान पनि गा¥हो थियो । २०५९ सालमा हामी दोलखाबाट यहाँ आयौ । हामीलाई धेरे गा¥हो थियो । पहिला अब प्लस्टार गरेको घरमा बसिन्थ्यो भने अब मार्बल हालेको घरमा बसिन्छ । पहिला एक तल्ले घरमा बसिन्थ्यो भने अहिले दुइ तल्ले घरमा बसिन्छ । हिजो अस्ति साइकल चढ्थ्यौ भने अहिले अब मोटरसाइकल चढेर एकदम आरामसँग जस्तो भन्यो त्यस्तै गरेर हाम िहिड्न सक्ने भएका छौ ।
मेहनती टिकाको परिवार नै काममा व्यस्त हुन रुचाउँछन । त्यसैले उनीहरुले नयाँ बनाएको घरमै पसल खोलेका छन । आज त्यही किराना पसल सुरु भएको पहिलो दिन हो ।
यो पसल चाहिँ टिकाका बुबाको जिम्मामा छ ।
टिकाको अगुवाईमा यो परिवारले हेटौंडामा आफ्नो बेग्लै पहिचान बनाइसकेको छ ।
नेपालको नक्सामा हेटौंडाबाट वीरगञ्ज जाने ।
हेटौंडा छेउको भारतीय सिमा नजिक पर्ने वीरगन्ज बजारमा बस्छन श्रीराम दास । १० बर्ष अगाडि सशस्त्र विद्रोहीले उनका बुबाको हत्या गरे । गाउँ अशान्त भयो । श्रीरामको परिवार गाउँमा बस्न सकेन । उनीहरु सदरमुकाम विरगञ्जमा आए । श्रीराम त्यतिबेला बैंगलोरमा बिबिए पढ्दै थिए । यहीबेला परिवारको सबै जिम्मेवारी श्रीरामको काँधमा आयो । जसोतसो पढाई सकेर उनी नेपाल आए । अहिले उनी यो क्षेत्रकै पुरानो विरगन्ज कमर्स क्याम्पसमा पढाउँछन । इमान्दार र लगनशिल श्रीरामलाई काम थालेको केही समय पछिनै क्याम्पसले थप जिम्मेवारी दियो । उनी व्यवस्थापन लगायतका जिम्मेवारी सहित क्याम्पसका संयोजक बने ।
बिहान त उनी व्यस्त भए । तर दिउँसोको समय त्यतिकै बच्यो । दिगो शान्तिका लागि व्यावहारिक शिक्षाको महत्व बुझेका श्रीरामले स्कुल खोल्ने विचार गरे ।
श्रीराम दास ः
यहाँको शिक्षाको गुणस्तर लो थियो । मलाई कता कता चित बुझेन । शिक्षा पनि त्यस्तो हुन प¥यो नि पैसा तिर्न । किन भने त्यही मान्छेहरु यहाँ एक हजार नतिरेर बाहिर बिसौ हजार तिर्छन काठमाडौमा चार पाँच हजार तिर्छन । यहाँ तिर्न मान्दैनन् त्यो के कारण भने यहाँको गुणस्तर राम्रो नभएर हो ।
साना साना नानीहरुलाई खेलाउँदै पढाउँदै गर्न बिर्ता बजारमा मन्टेश्वरी स्कुल खोले ।
हामीले बिस देखि रोक्दा रोक्दै ३५ पुग्यो । १५ दिन थपियो । हाम्रो बिचार थियो कि थोरै राखेर गुणस्तरिय शिक्षा दिने । तर गार्जिएनको रिक्वस्टले गर्दा टार्न सकिएन ।
वीरगञ्जका लागि यो पढाई नौलो थियो । वीरगञ्जवासीको माया पाएपछि यो बर्षदेखि मन्टेश्वरी कक्षासँगै कक्षा ८ सम्मको पढाई पनि सुरु गरेका छन ।
गाउँ ठाउँका विद्यालयमा शिक्षाको गुणस्तर घटेका बेला उनले यहाँ स्कुल सुरु गरेका छन । मेहनती शिक्षक र चुस्त व्यवस्थापन भए पढाई राम्रो हुने उनको अनुभव छ । त्यसैले त स्कुल सुरु गरेकै बर्ष यहाँ २५० जना भन्दा बढी विद्यार्थि भर्ना भएका छन ।
दास परिवार नै शैक्षिक क्षेत्रमा लागेको छ । कुमुदिनी एकेडेमीमा पढाउने श्रीमती समेतको सल्लाहमा श्रीराम स्कुल व्यवस्थापन र स्तरीय शिक्षाको योजना बनाउँछन ।
विजया दास ः
उहाँको गरेको देखेर हामीलाई पनि हौसला आउँछ । उहाँको गरेको देखेर हामीलाई केही गरौ कि प्लस मैले गरेको काम उहाँलाई सहयोग पुग्छ भने म एनिहाउ कुनै काम गर्न तयार छु ।
एकबेला भनेजस्तो काम नपाएका १८ जना मानिसहरु यहाँ काम गरिरहेका छन । श्रीरामको सानो प्रयासले उनी र यहाँको समाजलाई आर्थिक र शैक्षिक दुवै हिसाबले सहयोग भएको छ । यो स्कुलले विभिन्न कामका लागि महिनाको दुई लाख रुपैयाँ सम्म तिर्छ । अनि यसबाट भएको आम्दानीले एकबेला अप्ठ्यारो स्थितिमा परेको श्रीरामको परिवारलाई राहत मिलेको छ ।
नेपालको नक्सामा वीरगञ्जबाट सर्लाही जाने ।
वीरगञ्ज भन्दा पूर्व सर्लाहीको चन्द्रनगरका रामकेवल माझी हरेक मंगलबार बंगुरको स्वास्थ्य जाँच गराइरहेका भेटिन्छन । ३२ वटा बंगुर भएको यो फार्म रामकेवल अध्यक्ष भएको सर्वोदय सहकारीले संचालन गरेको हो । रामकेवल एकबेला राजनीतिक उद्धेश्यका साथ गाउँ गाउँ घुमिहिंड्थे । तत्कालिन सरकारले खोजी गर्न थालेपछि उनी भूमिगत भए । समय फेरियो, रामकेवल पनि फेरिए । सिद्धान्तले भन्दा उद्यम गरेर दिगो शान्ति र समावेशी विकास हुने ठाने उनले । समुदाय र देशको विकास विकासका लागि आर्थिक गतिविधिमा सामेल भएका रामकेवललाई अहिले टाउको उठाउने फुर्सद छैन । एकछिन ढिला भए फार्मका ३२ वटै बंगुर एकै स्वरमा कराउन थाल्छन ।
बोलेर दुनियाँ बनाउने सपना देखेका रामकेवल अहिले काम गरेर मात्रै समाज बन्ने रहेछ भन्नेमा पुगेका छन ।
रामकेवल माझी ः
खाँडी मुलुकमा गएर कति हानी लिएको छ । भन्नुुस न । उहाँहरुसंग गएर सोध्नुस न के के दशा भोगेको छ । के के दुःख भोगेको छ । भन्नुस न त्यसको अपेक्षा त हाम्रो यहाँ आनन्दले बसेको छ । पैसा भनेको डलरमा आउँछ । पनि नेपाली त आउँछ । नि डलर नआएपनि नेपालीमा त पक्कै आउछ ।
चन्द्रनगरमा मुसहरहरुको बाक्लो बस्ति छ । समाजले दलित भनेर हेला गरेको यो बस्तीका मानिसको पुस्तौनी ज्ञान हो सुँगुर पालन । तर अव्यवस्थित सुँगुर पालनले खासै फाइदा दिन सकेको थिएन । छाडा छोडिएका सुँगुरले गर्ने फोहोर गाउँको अर्को समस्या थियो । उनीहरु केही गर्न सक्ने अवस्थामा थिएनन् ।
आफु भन्दा ठुला जातको नक्कल गर्न नपाउँने, होटल व्यावसाय गर्न नसकिने, अनि परिवर्तन हुँदै गयो आर्थिकीकरण हुँदै गयो अब के गरु त भन्ने भन्दाखेरी आर्थिकरुपमा यिनिहरु कसरी बढौ भनेर यिनिहरु सोच राखेर यिनिहरु सुगुर पाल्ने काम सुरुभयो । त्यो सुगुरबाट हाम्रो समाजको ठूलाबडाहरु घृणा गर्न थाले ।
अहिले रामकेवलको दिन आफ्नै तरिकाले बित्छ । हप्ताभरि गर्ने कामको समय तालिका छ उनीसँग । कसले के काम गर्ने भन्ने प्रष्ट छ ।
एकबिहानै बंगुर र खोरको सरसफाइबाट दिन सुरु हुन्छ ।
त्यसपछि बंगुरलाई दाना खुवाइन्छ ।
बिहानको आठ बजे भित्रै यो काम सक्नुपर्छ ।
बंगुर पाल्दा निस्केको फोहोरबाट गोबरग्याँस निकाल्न काम सुरु गरिएको छ ।
बंगुर पालनबाट सुरु भएको सर्वोदय सहकारीमा ५० जना जति संगठित भएका छन । रामकेवलको एक्लो प्रयासमा सहभागी हुनेहरुको संख्या बढीरहेको छ ।
बंगुरका बच्चा बोकेर यहाँसम्म ल्याउनेहरु यो अभियानमा सक्रिय छन । कामका लागि उनीहरुले अन्यत्र जानु परेको छैन ।
रामचन्द्र कापर ः
काँखमा बोकेर ल्याएको अहिले बोक्न सकिराखेको छैन । ठुलो भएछ । आन्दानी आउने बेला भईसकेको छ । पहिला ५÷६ किलो सम्मको थियो वयट अहिले ५०÷६० किलो पुगिसकेको छ ।
हामीहरु भने थ्यो एजेन्टलाई बिदेश जानलाई मलाई भन्थ्यो एजेन्टले भन्यो एक लाख देखि डेढ लाख सम्म पर्छ । तपाइलाई मैले भने मेरो यो राँगा र टायर सुद्दा उठाउनुस पाँच लाख दिन्छु । भन्दा उसले अह म मात्र तपाईलाई उडाउँछु । टायर र राँगालाई उठाउँन सक्दिन । त्यो भन्दा हामीलाई यही ठिक छ ।
दुई बर्षअघि पाल्न थालेयता उनीहरुले १२ वटा बंगुर बेचे । यसबाट झण्डै १ लाख रुपैयाँ आम्दानी भयो । अब भने यसले राम्रै आम्दानी गर्नेछ ।
६महिनामा तपाईको एभरेजको हिसाबमा माउ हेरी हेरी हुन्छ । तै पनि एभरेजमा १० वटा पाठापाठी हुन्छ । २ सय पाठापाठी आउँछ । ठाउँ सम्म पुगे भने देखिन २ सयको ३ हजारले जोडौ अब कति हुन्छ ?
एकबेला सिन्को नसार्ने श्रीमानले काम गरेको देख्दा रामकेवलकी श्रीमती दंग छिन ।
सुमित्रा माझी ।
पहिला सर के थियो भने राजनीति गरेको बेला मान्छेहरुले गाउँ र अरु मान्छेको पैसा ठगेर खान्छ भन्थे तर अब बंगुर पालन गरेपछि अब यस्तो कसैले भन्दैन ।
रामकेवल काममा लागेपछि छोराछोरीले पढ्न पाएका छन । माझी परिवारकी एउटी छोरी काठमाडौंमा नर्सिङ पढ्दैछिन । एक छोरा र एक छोरी सदरमुकाम मलंगवामा बसेर पढीरहेका छन ।
रामकेवलले गरेको प्रयासले उनको परिवार मात्रै होइन सम्पूर्ण गाउँ र यहाँको मुसहर जाति नै आत्मानिर्भर बन्ने बाटोमा लागेको छ ।
नेपालको नक्सामा सर्लाहीबाट मोरङ जाने ।
पुर्वी नेपालको झापा जिल्लामा जन्मेका नारायण नेपालले २२ बर्ष भारतीय सेनामा काम गरे । जागिरबाट फर्केपछि उनी सशस्त्र विद्रोहको मोर्चामा सामेल भए । शान्ति स्थापनाका लागि विद्रोही पक्ष र सरकारी पक्षबीच सम्झौता भएपछि उनी लडाकु शिविरमा बसे । शिविरमा बसिंरहँदा उनको मन शान्त भएन । आफू, समाज र देशको दिगो विकास र शान्तिका लागि आर्थिक गतिविधिमा सामेल हुनु उपयुक्त ठाने नारायणले । कमजोर बन्दै गएको परिवारको आर्थिक अवस्था सुधार्न र शान्तसँग बस्न उनले शिविर छोडे । पैसाको खडेरी छँदैथियो । उनले जागिर खाँदा सिकेको च्याउ खेति गर्ने तरिका सम्झिए । त्यही सिपलाई व्यावसायिक रुप दिन झापा छोडेर विराटनगरतिर हान्निए । मनभरि केही गर्छु भन्ने आँट थियो तर खल्तीमा जम्मा ४० हजार रुपैयाँ थियो ।
विराटनगर उपनगरपालिका वडा नं. १५ मा त्यसै खेर गएको खाली जग्गा भाडामा लिए । आफु बस्न र च्याउ फलाउन छुट्टा छुट्टै दुइवटा छाप्रो बनाए । च्याउको बिउ भारतको कानपुरबाट मगाए ।
च्याउ त फल्यो तर बिकेन । मानिसलाई पल्काउन उनले सुरुमा सस्तोमा च्याउ बेचे । स्वाद र यसको फाइदा थाहा पाएपछि च्याउको माग बढ्यो, भनेजस्तै भाउमा च्याउ बेच्न पाइयो ।
नारायण नेपाल ः
विराटनगरमा पहिले तीस चालिस किलो च्याउ बेच्न धै धै पथ्र्यो । मुस्किल पथ्र्यो । फनफनी घुम्नु पथ्र्यो मैले तर ३० ४० किलो च्याउ हौइन २०० किलो च्याउ बेच्न नि गाह्रो छैन ।
अहिले बजारमा च्याउ लान ढिला भयो कि नारायणको मोबाइलमा फोन आइहाल्छ ।
राधिका राई ः
पचार पाकेट सय पाकेट पनि बिक्छ । च्याउ उत्पाद नै हुदैन । च्याउ ल्याने नै नारायण नेपाल भने पनि हुन्छ अरुले च्याउ दिनै सक्दैन ।
नारायण सफल भएपछि च्याउ खेति गर्न चाहानेको संख्या बढ्यो । अहिले उनी च्याउ खेति गर्न चाहानेलाई सिकाउन टाढा टाढासम्म जान्छन ।
उनको चर्चा मात्रै भएन । आम्दानी पनि बढ्यो । भाडामा लिएको जग्गा किने । अहिले त्यही जग्गामा पक्की घर बनाएका छन ।
जति पनि लेवर खर्च र या माल मेटिरियलको र्खाहरु लाग्यो त्यो दिन भरि ७ ८ जना लेबरले यहा काम गदथ्यो र ठेकेदार थियो । म तिन बजे उठेर म त्यही झोपडीमा च्याउ टिप्थेँ । अब त्यही च्याउ म बिहान ७ बजे लगे बेच्थे । र आठ बजे मिस्त्रिहरु आउँथे । म चुप लागेर बस्थे र बेलुका त्यही पैसा लेवरहरुलाई दिन्थे । उनीहरु थाहा पाउँदैनथ्यो त्यो कुरो ।
च्याउ खेति गर्न धेरै ठाउँ चाहिँदैन । अनि बल लगाएर गर्नुपर्ने काम पनि हुँदैन । त्यसैले अशक्त अवस्थामा समेत परिवारकै सदस्यले यो काम गर्न सक्छन ।
राधिका नेपाल ः
उहाँ आर्मीमा हुदा म पनि गको थिए। हामी परिवारै त्यही थियौ । उहाँले सिक्न प¥यो भन्दा मैले नै समर्थन गरे । मेरो चाहि भावना के थियो भने आर्मीमा भए पनि नेपालमा गएर केही गर्नू छ बाह्य कुरा पनि केही सिक्नु पर्छ भन्ने सोचाइ मेरो पनि थियो ।
नारायणले खान पल्काएको च्याउको बजार अहिले इलाम, धरान, इटहरी सम्म फैलिएको छ ।
च्याउ खेतीलाई उनले उद्योगकै रुपमा दर्ता गरेका छन् । राधिका च्याउ स्वादका पारखीको छनौटमा पर्छ । अनि च्याउ खेति गर्ने तरिका सिकाउन पनि नारायण नेपाल नै सबैको प्राथमिकतामा पर्छन । त्यही भएर नारायणले बर्षेनी चार लाख जतिको आम्दानी घरै बसी बसी गर्छन ।
आर्थिक विकास र उन्नतिका लागि गाउँ ठाउँमै बसेर केही गर्ने मानिसहरु थुपै्र भेटिन्छन । तर समयसँगै उनीहरुको ज्ञान हराएर जान्छ । उपयुक्त नीति र कार्यक्रम तथा प्रोत्साहनको अभावमा उनीहरु मध्ये धेरै पेशाबाट पलायन हुन्छन । यि किसान र उद्यमी सफल हुनाका धेरै रहस्य छन । केही समय अघि रेडियो सगरमाथा र स्थानीय रेडियोको पहलमा विराटनगर, हेटौंडा र नेपालगञ्जमा यिनै सफलताका कथा सुन्न र सुनाउन अनुभव आदान प्रदान कार्यक्रम समेत गरियो ।
समिटको बाइट ः
मान्छेमा इच्छाशक्ति र सीप, ज्ञान छ भने त्यो जग्गा जमिन पुँजी नभएपनि गर्न सकिन्छ ।
सुरुमाचाही हामीले भाडामा बसेर गाईपालनको क्षेत्रमा काम गयौं र अहिले हामीसंग २० २५ वटा गाई छ । लगभग दिनमा एक डेढ सय दुध घरैबाट गछौं ।
सहकारी त्यही हो जो सहकार्य गर्नसक्छ ,सहकार्य गर्न सक्छ ।
जनशक्तिको कमि होईन हाम्रो मानसिकतामा कमि छ ।
सकियो इच्छाशक्ति भयो भने हामी जे पनि गर्न सकिन्छ ।
कृषिको बिकासको लागी सरकारको निति स्पस्ठ हुनप¥यो ।
हाम्रो देशको युवाशक्ति कस्तो खालको छ भन्नुहन्छ भने एक करोड पैसा एकै रातमा चाहियो ।
नेपाललाई बचाउने भनेको कृषि नै हो । नेपाली युवालाई रोजगारी दिने सम्पुर्ण कुरा कृषि नै छ ।
साँच्चै देशको माया गर्ने हो भने देशको समस्यालाई बुझै र समस्याको समाधान गरौं ।
कुनै पनि मानिसको आर्थिक बिकास हुनुभनेको सामाजिक र साँस्कृतिक बिकास हुँन उतिकै आवश्यक छ । जव सम्म सामाजिक बिकास हुँदैन तब सम्म आर्थिक बिकास हुँदैन ।
सबभन्दा पहिलो त्यो युवाहरुमा कमाउने क्षमता भईदियो भने हाम्रो गाउको बिकास हैन व्यक्तिको उत्थानमात्र होइन देशकै राष्टकै उत्थान हुन्छ । यदि पैसा कमायो भने अरुलाई पनि सहयोग गर्न पाइन्छ । त्यो दुई पैसा अरुलाई गयो भने अरुले पनि त्यो चाहाना बोक्छ । त्यो सीप आउछ । उसमा कुनै यदि रोजगारका कार्य संञ्चालन गर्दछ भने त्यो अरुले पनि हेरेर अरुलाई पनि देखाउँछ ।
उन्नतिको लागी राजनिति भन्दा पनि आर्थिक बिकासलाई नै जोड दिनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
हरेक नेपालीलाई काम गर्न गाह्रो हुन्छ । किन भने समाजले चाही कुनै पनि सानो काम ग¥यो भने त्यो व्याक्तिलाई होच्याएर बोलाउछ । यदि हजुरहरु कोहि हुनुहन्छ भने तपाइले पनि आफ्नो छोराछोरीलाई साने काम गर्न दिनु हुन्न । किन भने त्यसको समाजले चाँही होच्याउछ । फलानोको छोराले यस्तो काम गरेछ । हो त्यसकारण यस्तो सानो काम गर्नेलाई नै होच्याउछ । भनेपछि हरेक व्यक्तिले काम गर्न दिइदैन त्यसकारण हरेक व्यक्ति उद्यमशील बन्न खोज्दा खोज्दै पनि सानो कामको दृष्टिकोणले पनि काम गर्न गाह्रो हुन्छ ।
एक घारबाट मैरी पालन सुरु गरें र अहिले म संग ५० घार मैरी छ । र म अहिले मैरीबाट गर्दै जाँदा राम्रो आन्दानी हुँै गयो । त्यसले गर्दा अहिले म मैरी पालन पेसामा चाही अग्रसर भएर लागी राख्या छु ।
अनि अहिले यो पेसा नहँुने यो भनैं न यो असार श्रावन पैसा नहुँने बेलामा अहिले भटाभट पैसा लिदै छु ।
किन हिरो हँुन पुग्नु भो उहाँहरु ? भने उहाँहरुले आर्थिक बिकासमा आफ्नो पेसालाई लिएर जोड्न पुग्नु भो । उहाँले तरकारी खेती गर्न भयो के हो तरकारी खेती ? तरकारी खेती गर्दाखेरी आर्थिक सफल कसरी पाउनुभयो उहाँहरुलाई मात्र तरकारी खेत ीगर्ने चोच कसरी आयो ? अरु किसान साथीहरुलाई किन आएन ? अरु किसानहरुलाई किन आएन ? हाँडी खोलाको नरहरी नन्दन दाईहरुले उत्पादन गरेको ३ रुपैँयाको १५ रुपैँया किन पाएन १५ रुपैँया हामीहरुले किन लिन प¥यो ? त्यही विषयको चिजको खोजको बिचमा यसलाई जोडेर अझ आर्थिकरुपमा अगाडी लानुको निम्ती जम्मैले जम्मैकुरा जानेको हँुदैन । मैले जानेको कुरा भन्दा नजानेको कुरा धेरै छ ।
सबै मान्छेमा एउटा सिप हुन्छ कला हुन्छ । हैन त्यसले त्यो कलालाई प्रयोग गर्न जान्नु पर्छ । यदि त्यो ग¥यो भने पक्कै पनि राम्रो हुन्छ ।
आफ्नो देशको उत्पादन भएको सामन जति चाही आफ्नै देशमा खपत गरेर अनि मात्रै देशबाट अन्य देशबाट ल्यानु पर्ने जस्तो लाग्छ ।
आफै रोजगार गर्न सकियो भने मात्रै स्वरोजगारी हुन सक्छ । सानो सानो छरिएर रहेका पुजीहरुलाई सङ्कलन गर्दै उनीहरुलाई अबश्यकता अनुसार त्यहा के गर्न सकिन्छ ? उनीहरुको आबश्यक्ता केहो? थारै भएपनि पुँजी गरेर उत्पादन बढि गर्न सकिने कामा मैले प्ररित गरेको छु ।
एउटा मसँग गोरु थियो । त्यो बेचेर एउटा साने पसल गराएँ । त्यो पसल गराएर चाही अब त्यसैबाट कमाउदा कमाउदै अहिले मानौन सानो किराना पसल भन्दा अलि चलेको छ । त्यो पसलबाट आफ्नो बालबच्चा बुवा आमा अरु जो जति छ सबै पाली राख्यो छु ।
जीवन राम्रो बनाउने भन्ने चहना सबैको हुन्छ । त्यस्तो खालको जो मान्छेसँग त्यो खालको टोरेन्ट पावर हुन्छ नी धैर्यता हुन्छ नी एकदमै कम मान्छेमा हुन्छ । त्यस्तो टोरेन्ट पावर त ।
उहाँहरु लगाएत अन्य पिडितहरुलाई कसरी समेट्ने यो आर्थिक सवालमा । आर्थिक बिकासको सवालमा चाही कसरी समेट्ने भन्ने कुराहरुको सवाल चाही छलफल गर्नुपर्ला ।
द्धन्द्धपिडित पहिलाहरु धेरै अगाडि सारिरहनु भएको अबस्था र अरु एकल महिलाहरुलाई अगाडी लाने के सोच बनाउने भएको छ । अरु एकल महिलाहरुलाई कसरी अगाडी बढाउन सकिन्छ ।
खाडि मुलुक गएर काम गर्नेको एकदुई जनाले बाहेक मजबुरी गर्ने हो । त्यहाँ गएर यहाँ यसएससी पास गरेको सर्टिफिकेट देखाएर त्यहाँ कुर्सीमा बस्ने जागिर पाइदैन । त्यति मेहनेत गर्ने हो भने यहाँ आफूसँग भएको दस कट्ठा एक बिगहा जमिलाई सदुपयोग गर्ने हो भने त्यहाँबाट ल्याउने जति खान लाउन प्रशस्त पुग्छ ।
उहाँहरु एउटा आत्मवल उच्च पारेर आउनु भएको ब्यातित्व हुनुहुन्छ । यसरी द्धन्द्धबाट पिडित भएर पनि उहाँहरुले आफ्नो मनलाई सानो पार्नु भएको छैन । आत्मबल उच्च पारेर उद्यमसिलतामा लागेर उद्यमशिलताबाट हामी अगाडी बढ्न सक्छौ र आफ्नो परिवारलाई अगाडि बढाउन सक्छौ । आफ्नो भाबि सन्ततीलाई राम्रो किसिमले शिक्षादिक्षा उपलब्ध गराएर एउटा सही मार्ग प्रशस्त गर्न सक्छौ भन्ने उहाँहरुको उच्चबल रहेको पाइयो ।
सोनाम सिं स्याङतान
सदस्य, स्थानिय शान्ति समिति, मकवानपुर
अब त्यसलाई बाटो देखाउने कुराहुन सक्छ । भने कतिपय आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्ने छैन भने प्याकेजमा प्रंोग्राम चाही आर्थिक लगानीको प्रोग्राम दिन प¥यो । के के गर्नेु प¥यो त्यसको क्यटगोरी गरेर भनौ समस्यालाई सही कुराको समस्या के हो भनेर समस्याको निर्धारण गरेपछि त्यो अनुसारको चही समस्याहरुको समाधान सरकारले चही ध्यान दिनुपर्छ ।
सबै नागरिकहरु आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्ने हुन सकोस । कम्तिमा आफै योग्य नहुँदा सम्म यहाँ बिभिन्न ढंगले उत्पीडनमा परेका छन् । त्यो नीतिगत समस्याको समाधान राज्यले गर्नु पर्छ । त्यसको भोली चाही आफ्नो खुट्टामा उभेर गास बास कपास स्वास्थ्या रोजगारहरु जस्ता आधारभूत समस्याहरु आबश्यक्ताबाट बिमुख हुन नपरोस नागरिकहरु ।
एकमाया, टिका, श्रीराम, रामकेवल र नारायण सबैको सफलताका पछाडि कडा परिश्रम, लगनशिलता र मेहनत लुकेको छ । एकपटक अस्तव्यस्त भएको जीवनलाई आर्थिक विकासकै माध्यामबाट अघि बढाउन उनीहरु सफल भएका छन । आर्थिक विकासको यो बाटो नअपनाएका भए उनीहरु सबैका उदाहरणीय बन्ने थिएनन । उनीहरुले गरेको काम आफू स्वयं, परिवार र समाजका लागि फाइदाजनक छ । अनी दिगो शान्ति र समुन्नत समाजको बाटोमा लाग्छु भन्नेहरुका लागि प्रेरणादायी पनि ।
फेसवुक कुमारी भाग एक
फेसबुकमा रमाउनेमा पर्छु म । मिल्थ्यो भने निन्द्रामा पनि चलाएर निदाउथे कि जस्तो लाग्छ ।
तर केही समय अघि म गाउँतिर घुम्न निस्किएकोले लगअन गर्न नपाएको धेरै दिन नै भएछ । इनबक्स भरी धेरै म्यसेज आएर थन्किएछन् । ट्याग भएर आएका केही फोटा र केही साथीका रमाइला कमेन्टहरु पनि । एक जना साथी छन् संकल्प माइला । उनी बेला बेलामा लेखि रहन्छन् ब्यतिगत भोगाइ । उनको लेख्ने तरिका रमाइलो लाग्छ । उनले पनि एउटा कथा झै लाग्ने भोगाइ पठाएका रहेछन् ।
राम्रो फोटो देखे पछि उनलाई एड रिक्वइस्ट पठाएँ । उनले त्यसलाई तुरुन्तै एसेप्ट गरिन । नाम थियो ज्ञानु माली । उनको इन्फोमा हेरे घर कीर्तिपुर रहेछ । कीर्तिपुर आफैमा ऐतिहासिक शहर । कुनै बेलाका शक्तिशाली राजा पृथ्वीनारायणलाई आच्छु आच्छु पारेको शहर । कुनै बेलाको पक्का नेवारी शहर । अहिले भने अरु जातकै मानिसको बसोबास धेरै भएको ठाउँ । अहिले पनि नेवारी शहरको पुरै अस्तित्व नै हराइ भने सकेको छैन । केही बाकी नै छ ।
अरु कारणले पनि बिशेष छ कीर्तिपुर । कहिल्यै भुइचालो नजाने शहर । अहिले सम्म पनि यहाँका मानिसले भुईचालो जाँदाको अनुभव गरेका छैनन् । अरु त अरु ९० सालको भुइचालोले काठमाडौ तहस नहस बनाउदा पनि यो शहरलाई केही गरेन ।
अनि नेपाली खानाको पर्यबाची बनेको गुन्दु्रक सुरु गरेको शहर । गुन्दु्रकको प्रसंग पृथ्वीनारायणले आक्रमण गर्दा ताकाको रे । त्यो बेलामा यो शहर माथिल्लो थुम्कामा थियो भने थुम्काबाट देखिने सबै भागमा खेती पाती । अहिले बिश्वबिद्यालय रहेको क्षेत्र , तीनथाना नैकाप र भत्केपटी सबै तिर खेती । शहर भएको ठाउँबाट जता हेरेपनि रमाइलो ।
बाँकी अर्को भेटमा ...................
Labels: facebook kuramri, gocool, katha, thokar
स साना चकटी र सानै टेवुल भएको यो कोठा साना बिद्यार्थीका लागि तयार भएको पुस्तकालय हो । मिलाएर राखिएका किताब साना बिद्यार्थीलाई मनपर्ने कथा, कविता र अन्य रमाइला बालपुस्तक हुन् । यहाँ पुस्तक भन्दा बढि खेल्दाखेल्दै सिकिने शैक्षिक सामाग्रीहरु छन् । नवलपरासी जिल्लाको निक्कै पिछडिएको कोल्हुवा गाउँमा छ यो पुस्तकालय । ब्रम्ह प्राबिको बालपुस्तकालय । नयाँ नयाँ पुस्तक पढ्ने पाइने र खेल्दै धेरै कुरा सिकिने भएपछि बिद्यार्थीको संख्या बढेको छ ।
यहाँ बोटे माझी,मुसहर र थारुको बाक्लो बस्ति छ । आर्थिक अबस्था निक्कै कमजोर भएका उनीहरु बालबालिकालाई बिद्यालय पठाउने भन्दा पनि घरकै काम बढि लगाउन मनपराउँथे । बालबालिकाहरु पनि पढाईमा भन्दा घरकै काममा जोड दिन्थे ,धेरथोर सहयोग गर्थे ।
पुर्णबहादुर केसी, प्रधनाध्यापक, ब्रम्ह प्राबि , कोल्हुवा, नवलपरासी
बोटेमाझी र जनजाति बिद्यार्थी आउँछन् ............................. ।
बिद्यालयमा केही बर्ष अघि सम्म बिद्यार्थीको अभाब थियो । यहाँका शिक्षकहरुले गाउँका सबै बालबालिकालाई बिद्यालय पठाउनका लागि भन्थे । तैपनि बिद्यालयमा बिद्यार्थीको संख्या भने जस्तो हुदैनथ्यो । बालबालिका बिद्यालय आउँदैनथे । अहिले अबस्थामा निक्कै परिवर्तन आएको छ । गाउँमा पहिले जस्ता बिद्यार्थी डाक्न जानुपरेको छैन । तैपनि झन्डै गाउँ भरिकै बालबालिका बिद्यालय आउँछन् । अहिले यहाँ दुई सयको हाराहारीमा बिद्यार्थी छन् ।
यसरी बिद्यालय आउनुको कारण बिद्यार्थीको लागि तयार भएको पुस्तकालय हो । यो पुस्तकालय गाउँ भरिका बालबालिकाको लागि समय कटाउने ठाँउ भएको छ । राम्रा राम्रा पुस्तक सजिलै पढ्न पाइने भएकोले गाउँका बालबालिका बिद्यालय आएर पढ्न थालेका हुन् ।
थमनारायण शर्मा ,अध्यक्ष, ब्रम्ह प्राबि , कोल्हुवा, नवलपरासी
लाइबेरीले फाइदा भएको छ ........................................... ।
पुस्तकालयमा बिद्यार्थीले सकेसम्म धेरै कुरा सिकुन भनेर दिनको एक धन्टा पुस्तकालयमा बस्न पाउने नियम छ । अनि कुनै दिन कक्षा नभएपनि उनीहरु पुस्तकालयमा बस्न पाउँछन् । बिद्यार्थीले आफ्नो रुची अनुसार किताब पढ्न सक्छन् अनि रुचि अनुसार खेल्न पनि पाइन्छ । खेल सामाग्रीले बिद्यार्थीलाई पढाइमा सहयोग गर्ने किसिमको छ । बिद्यालयमा पुस्तकालयलाई ब्यबस्थित गर्न शिक्षकहरुले नै पालो पालो गरेर हेर्ने नियम छ ।
पुस्तकालय बिद्यालय आफैले बनाएको होइन । नवलपरासी डन्डाबजारको अग्यौली सामुदायिक पुस्तकालयको सहयोगमा बनेको हो । सामुदायिक पुस्तकालयलाई भने यसरी गाउँमा बिद्यालय पुस्तकालय बनाउन रिड नेपालले सहयोग गरेको हो ।
नवलपरासीकै अर्को बिकट ठाँउ बाघखोरको दुर्गा भवानी पनि चिटक्क परेको बाल पुस्तकालय छ । कक्षा पाँचकी मुना महतोलाई पुस्तकालयमा भएको कथाका कितावहरु पढ्न निक्कै मन पर्छ । पुस्तकालयबाट खेल्ने समाग्री लान नपाए पनि पढ्ने किताव भने घर लान पाइन्छ ।
मुना महतो , प्रधानाध्यापक, दुर्गा प्राबि, बाघखोर, नवलपरासी ।
कथाको किताब मन पर्ने........................................... ।
यहाँका धेरै बालबालिकाको अबस्था पनि कोल्हुवाको भन्दा खासै फरक थिएन ।
छन्नुराम महतो , प्रधानाध्यापक, दुर्गा प्राबि, बाघखोर, नवलपरासी ।
पढ्ने बानी नभएकोले बिद्यार्थीले .................... ।
पुस्तकालयमा समय बिताउन थालेका बिद्यार्थीले धेरै नयाँनयाँ कुरा थाहा पाएका छन् । धेरै बिदेशी भाषाका कथाहरु अग्रेजी र नेपाली भाषामा छन् ।
बाह्य पुस्तकले बिद्यार्थीको धेरै ज्ञान बढाएको............................ ।
यस्तै पुस्तकालय सिहनाथ प्राबि बरौलीमा पनि छ । यहाँ पनि बिद्यार्थीका लागि राम्रा पुस्तक छन् अनि बालबालिकालाई आकर्षत गर्ने सक्ने खेलौना पनि । यो भेगमा भने थारु जातिको बाहुल्यता छ । बिद्यार्थीलाई पढाउनुपर्छ भन्ने ठान्दैनथे ।
बुद्धिराम महतो , प्रधानाध्यापक, सिहनाथ प्राबि,बरौली, नवलपरासी ।
हाम्रोमा ८० प्रतिशत भन्दा बढि बिद्यार्थी थारु छन् ...................................... ।
अहिले पनि नेपालका धेरै बालबालिका बिद्यालय जान सकेका छैनन् । उनीहरुलाई बिद्यालय सम्म पु¥याउनको लागि धेरै खर्च र मेहनत चाहिदैन । यस्तै बालबालिकाको लागि पुस्तकालय बनाएर पढ्ने बानी मात्रै पर्न सके धेरै फाइलमा मात्र भएको शैक्षिक प्रगति सँच्चैको हुनसक्थ्यो ।
Labels: aankhijhyal, gocool, Nefej, tamang, thokar
छोएर अंगअंग झर्छ
कति मन हुदो हो
तिम्रो जिउमै सुक्ने ।
घुमको याद आयो
त्यही न थियो संसार हाम्रो ।
एक एक गरि भुइमा
पछारिन्छ र हराउँछ भेलमा
मेरो माया पनि
त्यसरी नै भिडमा मिस्सिएछ र पो
भेटाउँदिन यो शहरमा ।
केही भाग्यमानी पानीका थोपा
भल बन्छन् र बग्दै जान पाउँछन्
धेरै अभागी थोपाहरु बिलाउँछन्
सुख्खा धुलोमा ।
Labels: barsa, chhota kabita, gocool, thokar
लोपउन्मुख जाती सोनाहा ।
Labels: aankhijhyal, bardiya, gocool, Nefej, report, sonaha, thokar
भदौको महिनामा देवी देउता घुम्न निस्कन्छन रे । त्यही भएर टाढा टाढाबाट आएका धामीझाँक्रीहरु अहिले शैलुङ डाँडामा जम्मा भएका छन । यो झरीमा उनीहरु यहाँ जम्मा हुनुको एउटै रहस्य हो यिनै बाहिर निस्किएका देवी देउताबाट ज्ञान लिनु । आफूले गर्दै आएको परम्परा कायाम राख्ने र आफूसँग भएको विद्यालाई अझ बढाउने आकांक्षा लिएर विभिन्न ठाउँका झाक्रीहरु यहाँ जम्मा भएका छन ।
दोलखाको शैलुङ क्षेत्रमा भाद्र शुक्ल पुर्णीमा भन्दा तीन दिन अगाडि देखि नै मानिसहरुको घुईंचो लाग्छ ।
रामबहादुर कार्कीः झाँक्री शैलु«ङस्वर १ पैती , दोलखा
अघि सत्यजुगमा पराम्परा के रैछ भने सबै देबी देउता चाही नाग पञ्चमीमा भत्रिने रे अनि सबै बर्ता तिर्थ गर्ने घुम्ने कोही बिद्या लिने ज्ञान लिने आफ्नो लिएर जाने रैछ नी त हजुर ।
यो बेलामा शैलुङ नजाने झाँक्री निकै कम हुन्छन । अहिले मानिसहरुमा धामीझाँक्रीले बिरामी निको गराउँछ भन्ने अन्धविश्वास कम हुँदै गएको छ । तर पनि यो नेपाली समाजको निक्कै पुरानो संस्कृति हो, विश्वास हो ।
रणबहादुर बस्नेतः झाँक्री, शैलुङस्वर १ बस्नेतटोल, दोलखा
अगी अगीकाले त थुर्मी उडाउथे कुखुराको फुल उडाउने हामै्र आँखाले देखियो । अहिले कहीकाले पनि सक्दैनन् ।
कथामा सुनेका यस्तै विद्या सिक्न उनीहरु यहाँ आएका हुन । झाक्रीको कुरालाई एकैछिन बिर्सिदिने हो भने शैलुङ साँच्चिनै निकै कुरा सिक्न सकिने ठाउँ हो ।
दोलखाको शैलुङ क्षेत्र काठमाडौबाट १३५ किलोमिटर मात्र टाढा छ । यहाँ जाने बाटो अप्ठ्यारो छ । तर त्यतिकै रमाइलो पनि । यहाँ जाने जो कोहीले मगमग बासना आउने बुकी फूल देख्न र छुन पाउँछन । यो फूलले शैलुङको तामाङ समुदायमा निकै महत्व राख्छ । दशैंमा उनीहरु यही बुकीफूल टाउकोमा सिउरिन्छन । तामाङहरु जमरा राख्दैनन् । बुकेफूलले नै जमराको काम गर्छ ।
बिहान ६ बजेको यो समयमा आकाश खुल्ला छ । हामीले यो क्षेत्रमा बग्ने कोशी नदीको शाखा तामाकोशीको शिर देख्यौ । अनि दोलखाको सदरमुकाम चरिकोट पनि । तर गौरिशंकर हिमाल भने बादलले ढाकेछ ।
उकाली चढ्दै जाँदा जात्रा भर्न जाने मानिसहरुको संख्या पनि बढीरहेको छ ।
शैलुङ क्षेत्र रामेछाप र दोलखा दुइवटै जिल्लामा पर्छ । यहाँको जंगल निक्कै बाक्लो र ठूलो छ । जंगल धेरै जातिका औषधिजन्य जडिबुटीहरु छन ।
नेपाली हाते कागज बनाउन प्रयोग गरिने लोक्ता पनि यहाँ प्रशस्त पाइन्छ । यि लोक्ताका विरुवा हुन । सबै हुर्कन पाए भने पाँच सात बर्षमा यहाँ लोक्ताको निकै ठूलो भण्डार हुनेछ । जंगलको उकालो बाटोमा कतै कतै चियापसल पनि छन । मानिस धेरै नहिंडने हुनाले यस्ता चिया पसलहरु प्राय बन्द हुन्छन ।
बाटो भरिको एकमात्रै चिया पसल हो । आज जात्रा भएकोले मानिसको भिड हुने नै भयो । बिहानै देखि उकालो हिंडेर जात्रा भर्न जाने सबै भोकाएका छन । पसलमा बस्ने कसैलाई फुर्सद छैन । कोही माल्पुवा बनाइरहेका छन । कोही शैलुङको चिसो काटन सघाउने चिया बनाउँदैछन । भोक लागेकाले होलो यहाँ त जे खाए पनि मिठै हुने रहेछ ।
ठिङग्रे सल्ला, गोब्रे सल्ला र खस्रुको जंगलका बीच बीचमा नेपालको पहिचान बोकेको गुराँस पनि छ । बैसाख जेठ महिना भएको भए यहाँ फूलेको गुराँसले जंगल रातै हुने थियो ।
यो चाहिँ स्थानीय भाषामा छिरु भनिने फूल हो । धेरै फूलको बास्ना आउँछ । फूलका पारखी र सौखिनहरु यसलाई टिप्ने र सुँघ्ने गर्छन । तर छिरु फूलको भने बासना आउँदैन । बरु यसको निकै कडा गन्ध पो आउँछ । धेरैलाई यसको गन्धले टाउको दुखाउँछ । त्यसैले लेकतिर जाँदा देखिने सबै फूल सुँघ्नु पनि हुँदैन ।
यो निकै चिसो ठाउँ हो । यहाँ अन्न उत्पादन हुँदैन । तर अहिले गर्मीको याम भएकाले मानिहरुले बारीमा आलु काउली लगाएका छन । चिसो सुरु हुनासाथै उनीहरु बेंशीको घरतिर झर्छन ।
यहाँ भने बाँको पाकेर रातै भएछ । यो फल बंगुरको प्रिय भोजन हो । तर बंगुर नहुने ठाउँमा भएकाले यसले जंगलमा यसरी पाक्ने मौका पाएछ ।
बिहानै हिंडेका हामी अब भने शैलुङतिर पुगेका छौं । यो शैलुङ सुरु हुने ठाउँको महादेबको ओडार हो । सत्ययुगमा यतातिर घुम्न आउँदा महादेब यही ओडारमा धुनी लगाएर बस्ने गरेको कहानी सुन्न पाइन्छ ।
यो चाहिँ गोदावरी खुल्ने ओडार । ओडारमा रहेको यो ढुङ्गाबाट १२ बर्षमा एकचोटि दुध बग्छ भनिन्छ । त्यही नै हो गोदाबारी खुलेको ।
विश्वासकै कुरो हो । यो ओडारमा भने पापीहरु छिर्न सक्दैनन रे । त्यसैले यसको नाम नै धर्म दुलो । बल्ल आइपुगियो साँच्चैको शैलुङ डाँडो । डाडैडाँडा भएको यो ठाउँलाई पनि कुहिरोले सबै ढाकिसकेछ ।
बाँकी संसारले जनै पूर्णिमा भनेर चिनेको भाद्र शुक्ल पुर्णीमामा यहाँ ठूलो मेला लाग्छ । तर यहाँको मेला अन्तको जस्तो नुहाउने र जनै लगाउन भने होइन । परम्परागत रुपमा विरामी निको पार्ने भनिएका धामीझाँक्रीहरुले शक्ति र विद्या लिने ठाउँ हो यो । त्यसैले त डाँडो छपक्कै ढाकिएको छ, शैलुङ वरपरका झाँक्रीहरुको जात्राले ।
तीन दिन अगि देखि नै आएका उनीहरु यहाँ आउनु भन्दा अगि चित्त शुद्धि र आत्माशुद्धिका लागि गुफा बस्ने गर्छन । एकान्त खोज्दै हिंड्ने सबैले यसरी नै गुफामा बसेर आत्मशुद्धि गर्न सके कति राम्रो हुने थियो । झाँक्री नै पिच्छे गुफा बस्ने दिन भने फरक फरक हुन्छ । कोही त सात दिन सम्म गुफामा बस्ने रहेछन । यसरी गुफा बस्दा शक्ति बढ्छ रे ।
सन्तबहादुर थोकरः फस्कु ९,निगाले, दोलखा
कस्तो भने देखि एक गुफामा अर्को गुफामा अर्केा गुफामा वाङलुङ आउने थपिदै थपिदै यो घरको जग लाए जस्तो अनि चोटा छाप्यो अजन अलिकति गा¥हो लयो भोली अलिकती झ्याल हाल्यो छाना छाउदै अनि धुरी टक्क मेट्ने जस्तो हो । ९.१५१६.०० उदेश्य आआफ्नो देउताको फरकफरक हुन्छ होला । शक्ति देउ ज्ञान बढ्न आउ धनसम्पति शक्ति देउ सबै पुराइ देउ भन्ने होला । देउता कोहीलाई देबी, केहीलाई नरुवोन, सुन झाँक्री इत्यादी आउँछ आउन त तर देउता फरक भएपनि माग र गरगहना एउटै हुन्छ सबैको ।
उनीहरुको गुफा बस्ने ठाउँ खोज्ने तरिका पनि भिन्न भिन्न रहेछ ।
त्यो ठाँउ कस्तो छान्ने पर्छ भने अब हिजो आज केही जलाको ठाँउ फेला पा¥यो । पाको गराउन प¥यो नी चेलालाई त्यो भुतभुते पन्छाएर त्यसैमा बति बालेर बसिन्छ च्यानमाथी । एउटा पराम्पराको कुरा के छ भने देखि त्यहाँ मसान बीरहरुलृ बास गरेको हुन्छ रे । त्यो बीर चलाइ आइज त्यो बीरहरुलाई परसर भन्छौ भनेर त्यसलाई राखेर बस्ने ।
झाँक्रीहरुको विस्वास फरक फरक छ । उनीहरुको अनुभवमा धेरै मानिसहरु अझै पनि यस्ता कुरामा बिस्वास गर्छन । देशका अन्य ठाउँको तुलनामा शिक्षा र विकासको ज्वालाले धपक्कै बलेको काठमाडौं उपत्यकाका झाक्रीहरुको पनि यता झरेका छन् ।
गंगाबहादुर कार्कीः कीर्तिपुरनगरपालिका, भत्केपाटी , काठमाडौ
हावाहरुको हेरौ भने त केही पनि देखिदैन । हावाको भरमा काम गर्नु पर्छ गरिन्छ । कस्ता कस्ता डाक्टरका श्रीमतीहरुलाई पनि डाक्टर त जान्ने हुन्छ नी त्यस्तालाई पनि हामीले गएर फुक्दा बिसेक हुन्छ । ३३.२४
अब डाक्टरले हेर्छ । हेरेपछि उसले औषधीहरु दिन्छ । निको हुदैन झारफूक गर्छ झाँकंं्रीले निको हुन्छ । अनी डाक्टरले मात्रै पनि हुदैन । झाँक्रीले मात्रै पनि हुदैन । लागु छ भने झाँक्री चाहियो अन्नबाट निस्केको छ भने बिरामी छ भने डाक्टर चाहियो ।
झाक्रीहरुको दावी कतिसम्म सत्य हो त्यो त मानिसको विश्वास मै भर पर्ला तर के कुरा पक्का हो भने, झाँक्री नहुने हो भने शैलुङको जात्रा खल्लो हुन्छ ।
अण्डा राखेको चाही के भने भाला त्रिशुल चाहीनी आफ्नो मालमतो घन्टा यस्तो रुदंक्षको माला चेला लिएर गुरु लिएर साथमा आउने बेलामा त्यो चार सुरमा राखेको चाही त्या कसैले त्यो धामीझाँक्री पनि कस्तो हुन्छ भने कसैले केही खेलेर त्यो कतिको जान्ने रैछ भनेर हान्छन्। के उताबाट केही उठाएर त्या हान्दा खेरी चाही शिकारी उठाएर हानेको हुन्छ । त्यो छेल्न राखेको हामीले ।
शैलुङ क्षेत्रको सबैभन्दा अग्लो डाडामा हामी पुगेका छौ । यहाँ रहेको ढुङ्गामा गुरु पद्यसंभबको पाइला भएको मानिन्छ । त्यसैले बौद्ध धर्मावलम्वीहरु पनि यो क्षेत्रलाई पवित्र ठान्छन । पद्यसंभवले बालेका १०८ वटा बत्ति अनुसार नै यहाँका डाँडा बनेका हुन भनिन्छ । यसरी सय भन्दा बढि डाँडा भएकैले यो क्षेत्रको नाम शैलुङ रहेको जनश्रृति छ ।
फरक मान्छे, फरक विश्वास । अनि पुण्य कमाउने होस, धर्म गर्ने होस वा पितृलाई तार्ने सबैका आ आफ्नै तरिका । बौद्ध धर्मालम्वीहरु यसरी जमिनमा सुतेर नाप्दै गर्ने परिक्रमालाई गोङदाप्पा भन्छन । यो उनीहरुले गर्ने उत्कृष्ट र सम्मानित ढोग हो ।
यहाँ चार पाँच सय बर्ष अगाडि बनेका मानेहरु पनि छन ।
यो पवित्र ठाउँ अब कुहिरोले ढपक्कै ढाकेको छ । छेउकै मान्छे पनि चिन्न गारो । मौसम खुलेका बेला यहाँबाट टाढा टाढा सम्म देखिने थियो । वित्रम संवत १९९० सालको भुईंचालो आउनु भन्दा अगाडि यहाँबाट काठमाडौंको १९ तले धरहरा समेत देखिन्थ्यो रे ।
भदौरे झरी बढदै छ । तर पनि झाँक्रीहरुले आफ्नै तालमा एकोहोरो नाच्न छाडेका छैनन् ।
धावा घिसिङ ः डडुवा ९,छागा, रामेछाप
म केही बर यहाँ छ लव्यभव्य त्यो हिसावले । मलाई फलिफप नै छ । म यहाँ आउदा खेरी म सात रात सात दिन गुफा बस्छु । म महादेव थानमा काँचो च्यानमा कि दोभानमा बस्दा खेरी मलाई चाही वर माग्दा खेरी मसानकाट्छु । मलाई वर दिइ रहेको छ ।
मन न हो । बर्ष दिनभरि राम्रो हुने भएपछि कसले पो एक दिन मेहनत नगर्ला र ? तर यहाँ शत्ति पाउन र भक्ति देखाउन मात्रै होइन रमित हेर्न पनि मानिसहरु आएका छन । युवाहरुको यो जमात जात्रा हेर्नकै लागि निकै टाढाबाट आएको रहेछ ।
इन्द्रराज तमाङः जात्रा लाग्दो रैछ यो जनै पुर्नेमा त्यही भएर । त्यही भएर केरे मेला हेर्न आको साथीहरु धेरै हुनुहुन्छ । साथीहरुले जाऔ रे काभ्रेपलाञ्चोक देखि घाएर आको छु ।
यो चाहिँ पहिलो बुद्धले बचाएको बाघ । काभ्रेको नमोबुद्धमा अलपत्र परेको बाघको बच्चालाई बुद्धले आफ्नै मासु खुवाएर बचाएको कहानी सुन्न पाइन्छ । त्यही बाघ शैलुङमा आएर बसेको छ, ढुङ्गाको रुपमा । बुद्धसँग जोडिएका यस्ता प्रसंग यहाँ थुप्रै छन ।
शैलुङ चौरी पाइने ठाउँ हो । चौरीको दुधबाट बनाइने यहाँको छुर्पी निकै राम्रो र स्वादिलो पनि हुन्छ । तर यसपालीको जात्रामा छुर्पी एक दमै कम छ । सायद मानिसको जिवनशैलीमा भएको परिवर्तनसँगै यो पनि हराउँदै गएको होला । हाम्रा ज्ञान र परम्परा दिनदिनै यसरी नै हराउँदै गएका छन । यस्ता कुराको संरक्षण तिर कसैले चासो देखाएको छैन । बर्षौं लगाएर आर्जेको हिमालमा पनि बाँच्न सघाउने यस्ता ज्ञान मासिंदा हुने क्षतिको पूर्ति कहिल्यै होला र ।
बादल लाग्यो आकाशमा
यो शैलुङको डाडोमा दाजुभाइ भेट भयो ।
दोलखा दाजुभाइ भेट भयो
रामेछापको दाजुभाइ भेट भयो
इष्टमित्र भेट भयो ।
स्वयाम्भुको माने फनन
बौद्धको माने फनन
जंगली फूल क्या राम्रो
फूलेको फूल क्या राम्रो
झरेको आशु नराम्रो
फाबरे गीत गाउँ त्यो राम्रो ।
तामाङ जातिको फाबरे गीत ।
यस्तै गीत गाएकै भरमा माया प्रिती साटिन्थ्यो रे पहिले पहिले । त्यसैले जात्रामा गीत गाउन निक्कै तम्सिन्छन तामाङहरु ।
युवाहरु यो गीत गाउन जान्दैनन । गला, भाव र शब्दको मिठास हुने यस्ता गीत गाउने संस्कार हराउँदैछ । यसलाई बाजागाजा सहितका गीतले पन्छाउन खोज्दैछ ।
तामाङ जातीको फाबरे गीत पनि हराउँदो संस्कार र संस्कृतिको शिकार बन्दैछ ।
अनि बाँकी रहनेछ, जात्रेले फ्याँकेको फोहोर र डाँडामा शान्ति छर्ने तथा मृत नातेदारको सम्झना गराउने दर्जी मात्र ।
Labels: aankhijhyal, dolakha, gocool, report, sailung, thokar
Labels: aankhijhyal, gocool, report, thokar